Yan Aung: ရင်ထဲက တိုးနယား
"မောင်လေး... အိပ်ပျော်နေတယ်ထင်လို့ လာနှိုးတာ..."
"ဟာ... ဟုတ်တယ်. အစ်မ... ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်... ဆောရီး ဆောရီး..."
ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းနေတဲ့ နှစ်ခန်းကျော်က အစ်မကြီး လေယာဉ်ကွင်းဆင်းတာကို လိုက်ပို့မယ် ပြောထားလို့လေ..
အဲဒါနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲကို ရွှီးဒိုင်းဆိုပြေး၊ သွားကို တဗျင်းဗျင်း တဗျုံးဗျုံး၊ တဗျီးဗျီးနဲ့တိုက်၊ (သွားတွေတောင် ပြုတ်ထွက်သွားမလားမသိဘူး. ဟတ်ဟတ်.) ဆံပင်တွေက မိုးကြိုးပစ်သလို ထိုးထောင်နေတာကို ရေနဲ့ဖိချ...
၅ မိနစ်အတွင်းမှာ ရေချိုးခန်းကိစ္စပြီးသွားပြီး နောက်ထပ် ၃ မိနစ်အကြာ စုစုပေါင်း ၈ မိနစ်မှာ အ၀တ်လဲပြီး ခေါင်းဖြီးပြီးလို့ ဖိနပ်ကောက်စီးနေပါပြီ. (ဟုတ်တယ်ဗျာ. ရေမချိုးနိုင်တော့ဘူး... But, သင်းပျံ့မွှေးကြိုင် ဗစ်ထရီအမွှေးတိုင် ဖြစ်နေဆဲပါပဲ. ဟတ်ဟတ်)
လေယာဉ်ကွင်းကို သူ့သူငယ်ချင်းအစ်မကြီးတစ်ယောက်လည်း လိုက်ပို့မှာပါ. သူ့သူငယ်ချင်းကားနဲ့ပေါ့. အိတ်က စုစုပေါင်း ၃ လုံး. မြန်မာပြည်ပြန်မှာဆိုတော့ အသားကုန်ဖိသိပ်ထိုးထည့်သွားတာ နည်းနည်းနောနောမဟုတ်ဘူး. ပေါင်ပို တမင်ပေးသယ်တာလေ. သူ့သူငယ်ချင်းအစ်မကြီးကလည်း ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ထားလို့ ကျောထဲမှာ တိုက်တေနီယမ်အချောင်းတွေ ထည့်ထားရတယ်. ဆိုလိုတာက အလေးအပင်တွေ မ,မနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ. ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်လို့ offer လုပ်ခဲ့တာပါ. ကဲ. ဇာတ်ရည်လည်သွားပြီနော်. (ပြောတုန်းကပြောပြီး ကျွန်တော် oversleep အဖြစ်ကောင်းနေတယ်လေ. ဟဲဟဲ.)
ကဲဗျာ. အတိုချုပ်လိုက်မယ်နော်. နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေး သုံးပုဒ်က ရှိနေသေးလို့.း)
JFK လေယာဉ်ကွင်းကို ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ. Cathay Pacific Airline ပါ. Terminal7ထဲကို ကားဝင်သွားတော့ ဟိုအစ်မကြီးကလည်း Lane မှားဝင်တယ်ဗျာ. ဖူး... အဲဒါနဲ့ ပြန်ပတ်နေရင် ပိုကြာနေမှာစိုးလို့ မှားတဲ့ Lane ဖက်ကပဲ ဆင်းလိုက်တယ်.
ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တာနဲ့ အေးစက်နေတဲ့လေထုကြီးက ကိုယ့်ပါးနှစ်ဖက်ကို တစ်ညတာခွဲခွာလိုက်ရတဲ့ ကိန္နရီမလေးက သူ့ဘဲဘဲ ကိန္နရာလေးကို ဖြစ်ညှစ်ပွေ့ဖက်လိုက်သလို ဇွိခနဲ.. ဇွက်ခနဲ လာပြီး နှုတ်ဆက်ပါတော့တယ်.
မဟုတ်ပါဘူး. လေက တိုက်တယ်ဗျာ. ကျွန်တော့်ပါးတွေ အေးတယ်ဗျာ. ဂျက်ကက်ကို ခေါင်းစွပ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်ဗျာ. ဇစ်ကို ဇွိခနဲ ဆွဲတယ်ဗျာ... ကဲ. ဇွိဆိုတာကို ရှင်းပြီနော်... ဇစ်က ချက်ချင်းအပေါ်ထိ မရောက်ဘူး. အဲဒါနဲ့အောက်ကို နည်းနည်းပြန်ချတယ်ဗျာ. ပြန်ဆွဲတင်တယ်ဗျာ. ဇွက်..... အဲဒီ့မှာ ဇစ်က Lock ကျသွားတယ်လေ. ရှင်းပြီနော်. ဇွိနဲ့ဇွက်ကို... ဟတ်ဟတ်.. ဆက်ပြောမယ်...
အိတ်ကြီးနှစ်လုံးနဲ့ Hand carry ကိုချပြီး အစ်မကြီးက အိတ်တစ်လုံးကိုဆွဲ. ကျွန်တော်ကတော့ အိတ်ကြီးနောက်တစ်လုံးနဲ့ Hand carry ကိုဆွဲလို့ အဆောက်အဦးကြီးထဲကို ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်၊ ဂွက်ဂွက်ဂွက်ဂွက်နဲ့ အပြေးဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်. ကျွန်တော်က Leather Boot စီးထားတယ်. အစ်မကြီးက ခွာမြင့်ဖိနပ်စီးထားတယ်. ဒေါက်နဲ့ ဂွက်ကို မရှင်းတော့ဘူးနော်.း)
နာရီကြည့်တော့ ၆း၄၀ ပဲ ရှိပါသေးတယ်. လေယာဉ်က ၉ ခွဲထွက်မယ်. ကောင်တာကတော့ ဖွင့်နေပြီ. အဲဒါနဲ့ ၀င်ပြီး တန်းစီလိုက်တယ်.
ကဲ. ဇာတ်လမ်း တစ်ခုတော့ပြီးသွားပြီနော်. နောက်တစ်ခုစမယ်.း)
အိတ်ပေါ်အသာလေး ကိုယ့်ဝိတ်ကိုမှေးတင်ပြီး ရပ်နေတုန်း ကိုဇော်ဝင်းထွဋ် ၀င်လာပါတော့တယ်..
ဟိုးထား... သူ့သီချင်းဝင်လာတာကိုပြောတာပါ.. လောသွားလို့..း)
ဘာတဲ့... "အနီရောင်လေးးးး အ၀ါရောင်လေးးး " ဆိုတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းလေးပါ...
အနီရောင်ဂျက်ကက်လေးနဲ့ အနီရောင် စကတ်လေးနဲ့ ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းလေးထဲကို တိုးဝင်လာတာကတော့...
တိုးနယားကြီးလားလို့ မပြောနဲ့နော်... ဟောင်ကောင်အဲလိုင်းဆိုပြီးတော့ အဲလို မညစ်နဲ့.. ခင်ဗျားစိတ်ထဲဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်. ဟတ်ဟတ်..
တကယ့်ကို ကြက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ တိုးနယားမလေး... အဲလေ.. လေယာဉ်မယ်လေးလို့ ပြောတာပါ.. ရောကုန်ပြီ. ဟတ်ဟတ်..
ကျွန်တော်ပဲ ဂေါ်ကြည့်တာလွန်သွားလားမသိဘူး. သူမ နည်းနည်းရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်သွားတာကို သတိထားမိလိုက်တယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိထားမိလိုက်တယ်. အိတ်ပေါ်မှာ ၀မ်းလျားမှောက်နေတာလားလို့မတွေးနဲ့ဦး... Leather Boot နဲ့ ဆံပင်ရွှေအိုရောင်နဲ့ အသားဖြူဖြူနဲ့ သွားတက်လေးနဲ့ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်စတိုင်လ်နဲ့ကိုယ် ရှိပြီးသားပါ. အဟွတ်စ်ဟွတ်စ်... ချောင်းကလည်းမကောင်းးးးးး)
Good morning... How are you..... တဲ့...
အသံလေးက ညက်ညောလိုက်တာ. ညင်သာလိုက်တာ. သိမ်မွေ့လိုက်တာ. နူးညံ့လိုက်တာ...
အာသွက်လျှာသွက် ကျွန်တော်တောင် အာစေးထည့်ထားသလို ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်... မနက်က သွားအမြန်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်...
Hi... How are you? ဆိုပြီး ခပ်ပြုံးပြုံး ကိုယ်ပြန်ပြောလိုက်တော့ သူမက ခါးလေးကို အသာညွှတ်လို့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ပြန်ပြုံးပြပါတယ်.
"မောင်ရန်အောင်... အစ်မတို့ ရှေ့တိုးရအောင်..."
ဟုတ်သားပဲ. ရှေ့ကလူတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နည်းနည်းတောင် အလှမ်းကွာသွားပြီ... အဲလိုကို စိတ်ချရတယ်. ဟတ်ဟတ်..
ကျွန်တော်လည်း မန်းဒေးကို အလုပ်ပြန်ဆင်းရမယ့် အလုပ်သမားတစ်ယောက်လို ရှေ့ဖက်ကို တိုးသွားခဲ့လိုက်တယ်. ဘယ်လိုပုံလည်း မြင်တယ်ဟုတ်...
ဒီလိုနဲ့ အစ်မကြီး လေယာဉ်လက်မှတ်ထုတ်တော့ Staff က ပြောပါတယ်.
This bag is heavy.... You will have to pay for excess..
Oh My Gosh... That bag is wayyyyy toooo heavy.... You gonna take some stuffs out, Madam.... တဲ့..
သူပြောမှ Scale ကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်. 43.33 တဲ့...
အာ... ၅၀ ပေါင်ထိ ရတာပဲကိုလို့ တွေးပြီး ချက်ချင်း ပြန် complain တက်မယ်အလုပ် အဲဒီ့ မမက ဆက်ပြောပါတယ်.
You are allowed to carry between 25 and 32 kilos at max. This bag weighs 43 kilos...
မမက သဘောကောင်းပါတယ်. ဆက်ပြောပါတယ်.
I will give you two boxes. Just take out some stuffs from this bag and put them in the boxes.
အစ်မကြီးက လှမ်းမေးပါတယ်. ပေါင်ပိုပေးမယ်. မရဘူးလားပေါ့.
မမက ပြန်ပြောပါတယ်. ရ၀ူးတဲ့... သိပ်များနေပြီတဲ့... သူပြောသလိုပဲလုပ်ပါတဲ့. တစ်အိတ်ကို ပေါင်ပိုနဲ့ပေးမယ်. နောက်တစ်အိတ်ကိုတော့ ဟဲဗီးနဲ့ပေးလိုက်မယ်. ပိုက်ဆံထပ်ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့. မင်းလည်း သက်သာတာပေါ့တဲ့.
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူ့အိုင်ဒီယာကောင်းတယ်လို့ ယူဆပြီး အစ်မကြီးကို လက်တို့လို့ ပြောရပါတယ်. ဒီလိုဒီလိုကောင်းတယ်. ဟိုလိုဟိုလိုက နိုးဂွတ်ပေါ့. မြန်မာစကားကို ဘရုတ်ကမ်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး.း)
အိတ်ကြီးကို ဘေးနားအသာဆွဲလို့ သော့ဖွင့်၊ မမ လာပေးတဲ့ ကဒ်ထူပုံးနှစ်ပုံးထဲကို ပစ္စည်းတွေပြောင်းနေချိန်မှာပဲ ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်က ကြည့်နေသလိုခံစားမိလို့ ရင်ထဲမှာ လှပ်လှပ်လှပ်လှပ်ဖြစ်သွားပြီး အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့....
Can I borrow your Tape, Sir? တဲ့
ဘယ်ကတရုတ်ကြီးလည်းမသိဘူး. သူလည်း ပေါင်ပိုလို့ ကဒ်ထူပုံးထဲ ပြောင်းထည့်ရတယ်လေ. အဲဒါ ပိတ်ဖို့ Tape လာငှားတာ..
အဲဒီ့အခါကျမှ တိုးနယားမလေးကို သတိရပြီး လှမ်းကြည့်မိလိုက်တော့...
သူ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတယ်ဗျာ...
ဘုရားစူး.... သူ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတယ်.
ကျွန်တော်လည်း ပစ္စည်းတွေပြောင်းနေတာကို ခဏချပြီး ခါးဆန့်သလိုလုပ်ရင်း သူမကို ပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ မချိုမချဉ်ပြန်ပြုံးပြပြီး သူမ မျက်နှာလွှဲသွားတယ်.
ကျွတ်စ်.... သိပ်ခက်တာပဲ.... မင်းရဲ့ မာယာတွေကို ငါနားမလည်. ငါ့မှာလည်း မိနေတယ်. အထုပ်နဲ့အထည်.
ဟုတ်တယ်လေ. ကိုယ့်အထုပ်တွေ အထည်တွေကိုလည်း ဆက်ပြောင်းရဦးမယ်. သူမကလည်း ပဲတွေလာပေးနေတယ်.
ခေါင်းကို အသာယမ်းလို့ ဆံနွယ်လေးတွေ ၀ဲခနဲ ဘက်ခမ်းဖရီးကစ်ကစ်သလို ခေါင်းပေါ်ကို ဆတ်ခနဲ ဝေ့တင်လိုက်တယ်.
ဩော်... အစ်မကြီးက သူ့တူမလေးကိုပေးဖို့ ၀ယ်ထားတဲ့ အင်္ကျီသေးသေးလေးကိုမြင်လိုက်လို့ ပြောတာပါ.း)
ခဏနေတော့ ပြီးသွားတယ်ဗျာ. တစ်ပုံးကို Average ဆယ်ကီလိုနှုန်းလောက်လျှော့ချလိုက်တယ်. ဒီတော့ ကျန်တဲ့အိတ်ကြီးကို ပြန်ချိန်လိုက်တော့ ၂၇ ကီလိုနဲ့ ကိစ္စပြတ်သွားတယ်.
ဟိုမမဆီပြန်သွားဖို့ တန်းစီနေတုန်းမှာ တိုးနယားမလေးက မျက်စိထဲဝင်လာပြန်တယ်.
ပစ္စည်းတွေတင်တဲ့ လှည်းလေးတွေကို ခရီးသည်တွေက သုံးပြီး လက်မှတ်ကောင်တာရှေ့မှာ ဒီတိုင်းချည်းထားခဲ့ကြတော့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာပေါ့.
အဲဒါကို တိုးနယားမလေးက လာပြီး သိမ်းတာပါ.
ညင်ညင်သာသာလေး ကျွန်တော့်ရှေ့ကို ဖြတ်လျှောက်လို့ ခါးလေးအသာကိုင်းပြီး လှည်းလေးကို တွန်းသွား၊ ဒေါင့်မှာသွားစီ၊ ပြန်လာ၊ လူကို ကြည့်ချင်သလို မကြည့်ချင်သလို လုပ်၊ ကိုယ့်ရှေ့က ပြန်ဖြတ်လျှောက်၊ နောက်တစ်စင်းသွားပြန်စီ...
သိပ်ခက်တာပဲ. အေးဆေးနေတော့လည်း လာလာဆွတယ်. ကိုယ်က စိတ်ဝင်စားဟန်ပြတော့လည်း ပဲပေးတယ်. ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး.
ခဏနေတော့ အိတ်တွေကို Check in ဆက်လုပ်ပါတယ်. ပြေလည်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ.
အစ်မကြီးက ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးစကားပြောပြီး ဂိတ်ဝကို ပြန်လိုက်ပို့တော့ တိုးနယားမလေးက ကျွန်တော့်ကို ဒီတစ်ခါ လုံးဝကြီး စိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျာ.
သူ့စိတ်ထဲမှာ သွားလေသူကို နှုတ်ဆက်နေသလို... အဲလေ... နောက်မတွေ့ရနိုင်တော့တဲ့ လူကို ကြည့်နေသလိုမျိုး...
၂၀၁၀ မှာ ရည်းစားမထားဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို အစ်မကြီးပြန်ပေးလိုက်တဲ့ Hand Carry အိတ်အလွတ်ကို ဆွဲရင်း သူမရှေ့က တည်ငြိမ်စွာ ပြန်ဖြတ်လျှောက်ခဲ့တယ်.
လုံးဝမကြည့်ဘူး.... သူမကို ကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ဘူး...
Yes... ကျွန်တော်သူမရှေ့က ဖြတ်လျှောက်လာတော့ သူမကို လုံးဝမကြည့်ခဲ့ပါဘူး.
လွန်သွားတော့မှ အစ်မကြီးကို လှည့်စကားပြောသလိုလိုနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်.
ကျွန်တော်လည်း မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ သိသိသာသာကြီး ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး... အဲလေ. ပြန်ပြုံးပြမိလိုက်တယ်.
ဒီလိုပါပဲ.... ရင်ဘတ်ထဲမှာ ရေဘဲ အကောင်နှစ်ဆယ်လောက်ကို သေနတ်နဲ့ ဆက်တိုက်ပစ်ချလိုက်သလို အသံတွေစုံသွားတယ်...
အဆောက်အဦးကြီးအပြင်ဖက်ကိုအထွက်၊ အစ်မကြီးက ကျေးဇူးစကားဆိုတော့ ကျွန်တော်သူမကို သွားနှုတ်ဆက်သင့်လား စဉ်းစားနေမိတယ်.
အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ တိုးနယားမလေးနဲ့ နောက်ထပ် staff တစ်ယောက် ဂျူတီချိန်းပါတယ်.
သူမ ကျွန်တော့်ဖက်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်း ရုံးခန်းအနောက်ဖက်ထဲကို ၀င်သွားတယ်.
အစ်မကြီး သူငယ်ချင်းကားက ရှေ့ရောက်နေပြီ...
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကိုတိခနဲပြတ်လို့ အဆောက်အဦးအပြင်ဖက်ကိုပြေးထွက်၊ ကားပေါ်ကို ပြန်တက်၊ ခါးပတ်တွေဘာတွေ ပတ်ပြီး နောက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လက်ပြနေလေရဲ့.... (လေယာဉ်ကွင်းအပြင်ဖက်က တက္ကစီတွေကို အသွားအလာမှတ်နေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲကြီးပါ...)
ဒီလိုနဲ့ တိုးနယားမလေးကို JFK မှာ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းစွာ ထားခဲ့ရတယ်...
အိုဗျာ... Terminal7ဗျာ. Cathay Pacific Airlines ဗျာ. JFK လေယာဉ်ကွင်းဗျာ. နယူးယောက်ဗျာ.... ဘာဖြစ်လဲ.... မင်း ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ...
ဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူး... အပြန်လမ်းမှာ အစ်မကြီး သူငယ်ချင်းနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ မကောင်းတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ကလူတွေကို အားကျတဲ့အကြောင်း၊ ခွင်ဝင်သွားတာနဲ့အေးဆေးထိုင်စားလို့ရတဲ့အကြောင်း၊ ဒီမှာသာ ကိုယ်တွေက စက်ရုပ်တွေလို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အကြောင်း စသည်ဖြင့်ပေါ့...
ကျွန်တော်လည်း တိုးနယားမလေးရဲ့ မျက်နှာလေးကို ပြန်မြင်ယောင်လိုက်၊ yeah... That's right... ဟုတ်တယ်အစ်မ... ဟာ... ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး... လို့ ၀ါးတားဖော်လို ဖစ်ရ်ှဖော်လို လိုက်လိုက်နဲ့ အိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်.
ကဲ... တိုးနယားလေးအကြောင်းက ဒီမှာတစ်ခန်းရပ်သွားပြီနော်...း)
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အ၀တ်အစားလဲပြီး ကွန်ကွန်လေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ ကွန်ကွန်လေးက ၀ီးးးး၊ ဝေါ၊ ၀ူးဆို နိုးထလာပြီး ၀င်းးးးးဆို စက်ပြန်သေသွားပါတယ်.
စက်ကိုပြန်ပိတ်၊ ပြီးတော့ ပြန်ဖွင့်...
ဒီတစ်ခါကျတော့ ၀မ်းးးးးးးးးးးးဆို ဂန့်သွားပါတယ်.
Oh My Gosh..... What's going on?????
ကိုယ်ဘာများလုပ်ခဲ့မိလဲ. ဘာတွေများဝင်ကြည့်မိလဲ... လို့ ညတုန်းကအဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ဘာမှလည်း အထွေအထူးမလုပ်မိ... ဘာမှလည်းမကြည့်မိ....
တံခါးကို ၀ုန်းခနဲဆွဲဖွင့်၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို ဆတ်ခနဲဖွင့်ပြီး ရေတစ်ခွက်ကို တဂွပ်ဂွပ်သောက်ထည့်ပစ်လိုက်တယ်.
ပြီးတော့ အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီး ကုတင်ပေါ်တက်၊ စောင်ခြုံလို့ အိပ်ထည့်လိုက်တယ်.
ညနေ ၄ နာရီမှ ပြန်နိုးတယ်...
ပြန်နိုးလာတော့ ကွန်လေးကို မကြည့်မိအောင် စိတ်ထိန်းပြီး မျက်နှာသစ်၊ ရေမိုးချိုးလို့ မနက်စာနဲ့ နေ့လယ်စာပေါင်းစားလိုက်တယ်. ကြက်ဥသုံးလုံးမွှေကြော်ပြီး လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့ တီးထည့်လိုက်တယ်. အဲလောက်ပါပဲ.
ပြီးတော့ ကွန်လေးကို ပြင်တယ်ထင်လား.. ဟုတ်ဘူး...
အပြင်မှာ နေမ၀င်ခင်လေး အမှိုက်တွေထွက်ရှင်းလိုက်တယ်. သွေးနည်းနည်းပူသွားတယ်.... ညနေခင်းဆောင်းလေလေးက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ကိုယ့်နားကို၊ ကိုယ့်ပါးကို တိုးဝင်နေကြတယ်. နေလို့ကောင်းလိုက်တာ...
ပြီးတော့ နက်ဖြန်အတွက် ထမင်းအိုးတည်၊ အခန်းရှင်း၊ အမှိုက်တွေသိမ်းနဲ့ ညနေခင်းလေး ကုန်ဆုံးသွားပါတော့တယ်.
အ၀တ်အစားလဲပြီး အပြင်ကိုပြန်ထွက်၊ Best Buy ကိုသွားပြီး မိတ်ဆွေအစ်မကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် Photo Viewer လေးတစ်ခု သွားဝယ်လိုက်ပါတယ်. ပြန်လာတော့ ပီဇာစား၊ Cheese Cake တီးနဲ့ ဗိုက်အတော်ကယ်သွားတော့မှ ကွန်လေးဆီပြန်လာခဲ့တယ်.
အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြည့်တယ်. ဖိုရမ်တွေဆိုတာလည်း မျိုးစုံအောင်ရောက်တယ်.
ဩော်... ကျွန်တော့်မှာ Back up ကွန်ပြူတာအဟောင်းလေးတစ်လုံးရှိတယ်. Pentium3လေးပါ. အဲဒါလေးကို သိမ်းထားတာ. ပြန်ထုတ်ပြီး Ethernet Cable တပ်လို့ လိုက်ကြည့်ရတာပေါ့. ဟိုဖက်က ဂန့်နေတဲ့စက်လေးကိုတော့ ဘေးနားမှာ ထားပြီး အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြည့်၇တာပေါ့..
ခုတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအတွက် တိုးနယားအက ကျင့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ...
အားလုံးပဲ ကောင်းသောည၊ ကောင်းသောနေ့လေးများ ဖြစ်ကြပါစေ...
thandar kyaw said...
အောင်မလေး ပုံတွေကြည့်ပြီး ဦးရန်အောင်တစ်ယောက် အိပ်ယာထဲမှာ တိုးနယားများကနေသလား....း) ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ် နေကောင်းခါစ ဂယောင်ခြောက်ခြားပေါ့..ဟိ ။
တိုးနယားမလေးတော့ သိဝူး ... အဲ ထိုင်နေတဲ့ တိုးနယား အနီလေးတွေတော့ ဆိုးဘူးဗျို့ ဟီး
မထင်..မထင်... တို့တော့ မထင်...း)) ရယ်လိုက်ရတာ မောင်ရန်အောင်ရေ... တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတာ.
အစ်မလည်း အိမ်မလည်တာ ကြာပြီ..ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်တာ.. အခုမှ အလည်ရောက်လာပြီး ပို့စ်တွေ စုဖတ်သွားတယ်..
ညီမလေး သန္တာပြောသလိုများ...နလန်ထူစ ဂယောင်ခြောက်ခြားများ ဖြစ်နေသလားကွယ်.း))) စိတ်မဆိုးကြေး. :D
သိပါဘူး တိုးနယားမလေးက ပေါင်ပိုတွေ ခွဲထုတ်ပြီး ပိုက်၂တောင်းဖို့ ကိုရန်အောင်နားကို ကြည့်နေတာလားလို့ ခုတော့ အိုကေနေတယ်ပေါ့ နာမည်လေး မှတ်ထားသေးလားး နေ့တိုင်းသွားလေ အဲ့ကို အဟေးဟေးးးး
ဆောင်းတွင်း အိပ်မက် ဂယောက်ဂယက်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာလား အစ်ကိုးp
စကားမစပ်နေကောင်း သွားပီပေါ့နော် ... ပို့စ်လေးက ဖတ်လို့ကောင်းတာတာ့ အမှန်ပဲအစ်ကိုရေ...
ခရီးအရှည်ကြီးထွက်ဦးမှာမို့ ဒီနေရာကနေပဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပီနော် ... အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ...
အခု ပေါင်၂၅ ဘဲ ပေးတော့ ဘာမှ မသယ်ရတော့ဘူး
တိုးနယားမလေးတွေက ပြောချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင်လဲ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းလွန်းလှပါတယ်..
ဒါတောင် မိန်းမချင်းနော်.. ယောက်ျားတွေဆို ပြောမနေနဲ့တော့..ဒါကြောင့် ခံစားချက်ကို နားလည်လိုက်ပါတယ်.. :)
ဖတ်ရတာ မျက်စိထဲတောင် မြင်ယောင်လာမိပါတယ်..
ဖတ်ပြီး ရင်ခုန်သံတွေတောင် ကမောက်ကမဖြစ်သွားတယ် မျက်စိထဲမြင်ယောင်ပြီးလေး)
So funny , LOL
Soe Moe Thu said...
လာလည်ရင်းဖတ်ကြည့်တာ ခင်ဗျားရဲ့ တိုးနယားမလေးကို သဘောကျသွားတယ်
အင်း မဖြစ် မဖြစ်